Nagarik News - नाकाबन्दीले सिकाएको पाठ
मानव समाजमा सुविचार र विवेक निरन्तररूपमा विकास एवं विस्तार हुँदै गइरहन्छ । तथापि, व्यक्तिगत स्वार्थ र लालचको पन्जाले मानिसलाई यसरी अँठ्याएको छ कि यसले मानिसलाई पीडा दिइरहेको छ । मानव कल्याणको नाममा हामी अधिकारका कुरा धेरै गर्छौं । तर, वास्तवमा हामी आफू लाभान्वित हुने कुरामात्रै गरिरहेका हुन्छौँ ।
स्रोतसाधन सम्पन्न देशहरू (कुवेत, इराक र सिरिया) मा भएको द्वन्द्वले तत्कालै विश्वको ध्यानाकर्षण ग¥यो भने आर्थिकरूपमा जर्जर दक्षिण अफ्रिकी देश सुडानमा भएको नरसंहारबारे त्यति चासो राखिएन । अहिले भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दी, जसले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारलाई ठाडो उल्लघंन गरिरहेको छ त्यो पनि उसैगरी हराएको छ । यस्तो संवेदनशील कुराहरूमा जब हामी पछाडि छौँ भने भौतिक विकासको के अर्थ भयो र ! त्यो त केहीबेरमै विनाश हुन सक्छ । अलकायदाजस्ता विद्रोही समूहको क्रियाकलापहरूबाट यो प्रष्ट भइहाल्छ ।
नेपालको संविधान लगभग ८ वर्षको ठूलो खिचातानीपश्चात् आएको हो । त्यसैले यो संविधानमा कमी–कमजोरीहरू हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, प्रगतिशील मान्छेको राजनीतिमा प्रवेशपश्चात् यो संशोधन हुँदै जानेछ । स्मरणीयमात्र होइन आश्चर्यजनक कुराचाहिँ के देखिन्छ भने, यसपटक भारतको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि संविधान ८५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिद्वारा पारित भयो । सर्वसाधारण जनता पनि कठिनाइ सहने, तर अत्याचार नसहने पक्षमा देखिन्छन् । यसबाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि अडिग छन् । नेपालको यस किसिमको साहस र स्वनिर्णयबाट पहिलो पटक भारतले ठूलो झट्का महसुस ग¥यो । उसले आफ्नो रूष्टता नाकाबन्दीमार्फत् प्रकट ग¥यो । आफैद्वारा पोषित मधेसका टाठाबाठा जमिनदार सामन्तहरूको बाहुल्य रहेको राजनीतिक समूहरूपी कठपुतलीहरूलाई चलाखीपूर्ण ढंगले प्रयोग ग¥यो । उसले मानव ढाल निर्माण गराई नेपाल–भारतको मुख्य व्यापारिक नाकाहरूमा सवारी साधनको आवतजावत अवरूद्ध गराएको छ ।
भारतले यतिसम्म कपट देखाएको छ कि आफूले गरेको अमानवीय व्यवहारलाई 'असुरक्षाका कारण अवरोध' भनी बाहिरी मुलुकहरूसामु ढाकछोप गर्दै आएको छ । यसरी नेपाली जनताको उजुरीलाई भारतको चर्को स्वरले दबाइएको छ र विश्वका सञ्चार माध्यमहरूले पनि आन्तरिक कुरा नबुझी जस्ताको त्यस्तै उद्धृत गरेका छन् । भारतले पहिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यस्तो नाकाबन्दी नलगाएको हैन । तर, यसपटक भने उचालिएका दलहरूको संयोजनमा दक्षिणी भेगमा नेपालको संविधानले मधेस र थारू जातिलाई नसमेटेको भनी विरोध प्रदर्शन एवं हुलदंगा भयो । यसबाट दर्जनौँ हताहत भए । वास्तवमा नेपालको संविधानमा मधेस, जनजाति, महिला र पिछडिएका वर्गको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको कुरामा साधारण मधेसवासी अनभिज्ञ देखिन्छन । सर्वसधारणको अनभिज्ञताको फाइदा त्यहाँका शोषक–जमिनदारहरूले लिएको देखिन्छ ।
यसमा कसैको मतभेद छैन कि थारू र मधेसीबाहेक धेरै जनजाति वर्षौंदेखि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसको फाइदा उठाउँदै इसाई धर्मविस्तार गर्न तल्लीन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू धमाधम धर्म परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् । आफ्नै देशमा अपहेलित भएर गरिबीमै जीवन बिताउनुभन्दा कोही आफ्नै आँगनमा आएर धर्मको नाममा सहुलियत दिन्छ भने आकर्षित हुनुमा उनीहरूको के दोष ? यस्ता लगत क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।
अल्पसंख्यक समूहहरूको अधिकारको सन्दर्भमा विश्वमा नेपाल उदाहरणको रूपमा रहेको छ । संविधानले सम्पूर्ण वर्गलाई समेट्न खोजे पनि सबैलाई उत्तिकै खुसी पार्नु असम्भव छ । महिलाले पुरुषजतिको अधिकार नपाए पनि नेपालको संविधान विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा उत्कृष्ट छ । अझै पनि यस क्षेत्रमा थप प्रयास भइरहेको देखिन्छ । सबैभन्दा विकसित मानिएको अमेरिकामा पनि अझै महिला समान आयको माग गर्दैछन् भने रंगभेद उत्तिकै गढिएको छ ।
ऐतिहासिकरूपमा नै तराईवासी नेपालीले भारतसँग सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध गाँसेको हुँदा उनीहरूलाई आफ्नो मुठ्ठिमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भारत विश्वस्त छ । अधिकांश मधेसी पुस्तौँ अघिदेखि भारतबाट बसाइँ सरेर आएका पनि छन् । नेपालकै पहाडी, हिमाली तथा जनजाति तराईमा सहज जीवन बिताउन आएका हुन् । तराईको उर्वर भूमिले ती परिश्रमीलाई आकर्षित गरेको हो । उनीहरूले तराईको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । मधेसमा बस्ने 'मधेसी' हुन् । उनीहरूलाई मधेसी भन्यो भनेर हेपिएको महसुस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । तर, मधेसमा बस्नेलाई 'भारतीय' वा 'धोती' भनेर हेप्ने मानसिकता तत्काल हटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्योबाहेक उनीहरूको रहनसहन र भाषालाई इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ । मैथिली भाषालाई हिन्दी भनी अवहेलना गर्ने प्रवृत्ति पनि त्याग्नुपर्छ । यी सबै कुराको जड सामुदायिक भावना र चेतनाको विकास नभएर नै भएको हो । नेपालको साक्षरताको आँकडा हेर्ने हो भने, राणाशासनको अन्त्यमा ८ प्रतिशतबाट बढ्दै अहिले लगभग ६५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । तथापि, कतिपय देशको तुलनामा यो निकै कम हो । अर्को कुरा शिक्षा भनेको एउटा साधनमात्र हो, जसले विवेकशील बन्न मद्दत गर्छ । शिक्षाको गलत प्रयोग भएमा नेपालका पढेलेखेका नेताहरूको जस्तै त्यो अनुत्पादक हुन्छ । यिनै नेताहरूको कमजोरीका कारण मधेसी जनता अझै अपेक्षित महसुस गरिरहेका हुन् ।
दुर्भाग्य, मधेसीको असन्तुष्टिको फाइदा लिने अभिप्रायले त्यहाँ बासिन्दालाई विभिन्न प्रलोभन र भ्रमपूर्ण प्रचारप्रसार गरी आन्दोलनमा उक्साउने भारतको कुटिल नियति रहेको देखिन्छ । कठपुतली बनाइएका मधेसका नेताहरूको मद्दतबाट भारत नेपाल गन्जागोल गरिरहन चाहन्छ । प्रतिनिधि सभालगायत अन्य क्षेत्रमा आफ्नो बर्चस्व राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतकै सल्लाहमा जनघनत्वको आधारमा प्रतिनिधि छानिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसबाट आफूले चाहेको कानुन बनाउन सकिने र नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विशेषतः जलस्रोतको उपयोग गर्ने भारतको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सात प्रान्तबाट आठ बनेको कुरा भारतलाई मन परेको छैन । कैलाली, कन्चनपुर, सुनसरी, झापा र मोरङलाई मधेस प्रान्तमा राख्दा पहाडी भागलाई तराईबाट अलग्याउन सक्ने र आइपरेमा सजिलै नाकाबन्दी लगाउन मिल्ने भारतको सोच छ । यसको प्रमाण भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको नदी हातेमालो योजनालाई लिन सकिन्छ । उनको योजना साकार हुन नेपालका नदीनालाहरू निकै आवश्यक छन् । यस योजनाबाट बाह्रै महिना सिँचाई गर्ने र पर्याप्त जलविद्युत् निकाल्ने लक्ष उनको छ ।
सिक्किमको भारतमा विलय तथा भुटानी नागरिक नेपालमा थुप्रिनुमा भारतको कुटिल चाल जिम्मेवार छ । भुटानी शरणार्थी स्वदेश फर्कन नसक्नुमा भारतको नै ठूलो हात रहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । भुटानको दक्षिणी भेगका नेपाली भुटानीको आफ्नो पहिचान, भेषभुषाको मागलाई कुल्चने काममा भारतले भुटान सरकारलाई मद्दत गरेको देखिन्छ ।
समग्रमा भारत नेपालको स्वाधीनतामाथि रिस राख्छ । अझै पनि भारतीय पाठ्यक्रममा 'बुद्ध भारतमा जन्मेको' उल्लेख छ । यही कारण नै कतिपय भारतीय नेपाल भारतकै एक प्रान्त हो भन्ने भ्रममा छन् । त्यसमाथि नेपालका अवसरवादी नेताहरूलाई नचाएर शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत अनावश्यक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
सन् १९५०को नेपाल–भारत सन्धिलगायत जलस्रोतका कतिपय सन्धि (महाकाली, कोशी योजना, गण्डक सिँचाई र विद्युत् सहमति, टनकपुर सहमति) असमान छन् । भारतबाट नेपाली भूभागको अतिक्रमण पनि त्यतिकै भइरहेको देखिन्छ । राणाशासनको समयदेखि आफ्नो देशभन्दा स्वार्थलाई ध्यानमा राखी भारतसँग भएका आजसम्मका सहमतिहरूले पनि यो परिणाम निम्त्याएको हो । यस्ता सम्झौताहरूको नेपालका शुभेच्छुक अन्य देशको मध्यस्ततामा दुईपक्षीय लाभका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन, कोलकातालगायतका सबै बन्दरगाहमा नेपालको सहज पहुँच हुनुपर्छ । फूलबारी कोरीडोरबाट बंगलादेशसँग पारवहनका निम्ति नेपाल सरकारबाट पहल नभएको हैन, तर भारत आफू यसबाट लाभान्वित नहुने हुनाले चुप छ ।
अहिले नेपालमा इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको अभाव देखिँदै गएको छ । बैशाखको भूकम्पबाट नाजुक भएको नेपालको आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र नाकाबन्दीका कारण थप प्रभावित भएको छ । सरकारले वैकल्पिक इन्धनका रूपमा दाउराको प्रबन्ध गरिरहेको छ । यसबाट हुने वनविनाशले निकट भविष्यमा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव समेत देखिने छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो विवरणमा भारतको नाकाबन्दीले नेपालको भविष्य धराप बनाएको भनी उल्लेख गरेको छ । वालस्ट्रिट जर्नलले नेपाली जनतालाई जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको नारा दिइ वर्गीय विभाजन गर्ने भारतको प्रयासलाई ठूलो गल्ती भनी उल्लेख गरेको छ । यसले भारतको दखल हिमाली देशमा कमजोर हुने बताएको छ ।
नाकाबन्दीले नेपालीलाई आफ्नो वास्तविकताको अवगत गराएको छ । संसारका आधिकारिक कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित रहने र बलियाहरूले नै राज गर्ने कुरा पनि यसपटक राम्ररी पुष्टि हुन पुगेको छ । यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन पनि झकझकाएको छ । त्यतिमात्र हैन आफ्नो जलस्रोतलगायत अन्य सम्पदाको सही उपयोगबाट भारतलाई चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झाएको छ । कुरामा मात्रै सीमित रहेको सयौँथरी फूलको फूलबारी नेपाललाई सबै नेपालीले समानरूपमा मलजल गरेको खण्डमा हामीले कहिल्यै कसैसामु शीर झुकाउनुपर्ने छैन ।